Gobolku wuxuu dhiirrigelinayaa baaritaanka COVID-19 ee carruurta iyo qoysaska | Faahfaahinta Wararka Degmada
Gobolku wuxuu dhiirrigelinayaa baaritaanka COVID-19 ee carruurta iyo qoysaska
Waaxda Caafimaadka ee Minnesota waxay ku talineysaa in dhammaan dhalinyarada da'da iskuulka ku laabaneysa dugsiga, isboortiga, ama waxqabadyada manhajka ka baxsan, iyo qoysaskooda, laga baaro COVID-19 labadii toddobaadba mar illaa iyo dhamaadka sannad-dugsiyeedka.
Saraakiisha caafimaadka waxay rajaynayaan in imtixaanka joogtada ahi uu gacan ka geysan doono furitaanka iskuulada iyo isboortiga oo shaqeynaya, iyo in la hubiyo inaan xadideyno faafitaanka COVID-19. Qof kastaa wuu yeelan karaa COVID-19 mana garanayo. In si joogto ah loo baaro waa habka ugu wanaagsan ee lagu ogaan karo inaad weli caafimaad qabto.
Waligeed ma fududaan in la iska baaro
Goobaha lagu baaro bulshada ee COVID-19 waxay ku yaaliin guud ahaan gobolka Minnesota, marka lagu daro cosbitaalada deegaanka iyo rugaha caafimaadka. Waad ballan sameysan kartaa waqtiga kahor ama waad soo geli kartaa.
Waxaad sidoo kale ku isticmaali kartaa tijaabada COVID-19 barnaamijka guriga.
Tijaabada waxaa lagugu siinayaa lacag la'aan adiga, waxaadna jadwal u dhigan kartaa qoyska oo dhan waqti isku mid ah.
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan jadwalka ballamaha kooxeed ee loogu talagalay qoyskaaga goobta imtixaanka bulshada, booqo COVID-19 Imtixaanka Beesha .